I-Agorapulse: Ibhokisi Lemilayezo Engenayo Elula, Elihlanganisiwe Lokuphathwa Kwemidiya Yezenhlalo | Martech Zone
Ngaphezulu kweminyaka eyishumi eyedlule, kwaSocial Media Marketing World, ngahlangana nabanomusa futhi abahle ngendlela emangalisayo U-Emeric Ernoult - umsunguli kanye ne-CEO ye I-Agorapulse. Imakethe yamathuluzi okuphatha iSocial Media igcwele. Kuyavunywa. Kepha i-Agorapulse iphatha imithombo yezokuxhumana njengoba izinkampani ziyidinga ukuthi ibe… inqubo.
Kuba nzima kakhulu futhi kunzima ukukhetha ithuluzi elifanele (noma amathuluzi) lezidingo zethu. Noma ngubani (njengami) ozama ukuphatha ama-akhawunti amaningi ashaywayo futhi enomsindo nge-SPAM nangezindawo zokuthengisa, i-Agorapulse idabula umsindo. Ukwenza kube kubi kakhulu, abathengisi bamathuluzi bashintsha okunikezwayo kwabo namamodeli entengo kakhulu, imvamisa bekhuphula amanani noma besuka ekuzisebenzeleni okungabizi kakhulu kuye emazingeni aphezulu ebhizinisi.
I-Agorapulse iyithuluzi lokuphatha i-Social Media engikholwa ukuthi liyithola kahle. Nakhu ukuthi kungani ngiyisebenzisa nsuku zonke futhi ngiyincoma kuwo wonke amaklayenti…
Azisekho izinxushunxushu ze-Inbox. Ngaso sonke isikhathi lapho ngingena ngemvume ngiba nombono ocacile webhokisi lokungenayo le-akhawunti ngayinye ngesibalo senani lezinto ezingilindele ukuba ngizibuyekeze.
Lapho sidlulela e-Agorapulse futhi sathola iphuzu lapho sasinebhokisi lokungenayo elithatha imilayezo eqondile, lathatha ukulalela, futhi sakwazi ukudlulisa ukuphawula kwesikhangiso endaweni efanayo, sasingakusebenzisa ngendlela esasizoyisebenzisa ngayo noma yiliphi elinye ibhokisi lokungenayo ohlelweni lwethu lwethikithi.
UJamie Mendelsohn - Lovepop
Ibhokisi Lemilayezo Engenayo Elihlanganisiwe Elakhelwe Ukonga Isikhathi
I-Agorapulse iklame indlela yayo ye- Ibhokisi Lemilayezo Engenayo Elihlanganisiwe ukukusiza ukufezekisa i-Inbox Zero ngokushesha futhi kalula. Yonke imilayezo emisha, ukuphawula, nokushiwo, kwe-Facebook, Twitter, ne-Instagram, kukhonjiswa ngokuzenzakalela kufayela le- ukubuyekeza isihlungi ukukusiza ugxile ezintweni zakho zakamuva futhi zihlala lapho uze ubuyekeze ngayinye noma ubuyekeze konke ngokuchofoza okukodwa kwenkinobho. Zonke izingxoxo zakho ziwela endaweni eyodwa lapho ungahlela khona, uphathe, unikeze, futhi ufake ilebula engxoxweni ngayinye nenhlangano yakho.
Abathonya - Bona igama lomthumeli nephrofayili ngakho konke okushiwo. Ngeza amalebula alula ukuhlukanisa abasebenzisi bakho namanothi angaphakathi ukuze unikeze umongo kuthimba lakho.
Ukuphawula kwe-Facebook Ad ne-Instagram Ad - Vumelanisa yonke imibono yakho yesikhangiso. Thola izibalo ngokushesha nje lapho uzifuna ngokulandelana kwazo.
Amathuluzi Ebhokisi Lemilayezo Engenayo - Izihlungi zebhokisi lokungenayo, izimpendulo ezigciniwe, izenzo zenqwaba, ukuhumusha okukodwa, izabelo zethimba — zithole zonke, noma ngabe ukhetha luphi uhlelo.
Qala i-Akhawunti Yakho Ye-Agorapulse yamahhala
Ukushicilela Okunembile Komphakathi
I-Agorapulse inika amandla ithimba lakho ukuthi lisebenzise kahle, lihlanganyele futhi lihlele okuthunyelwe kwakho kwemidiya yokuxhumana nabantu ukuhlela, ukuvumela, nokushicilela okuthunyelwe lapho bengathola khona ukusebenza okuhle kunethiwekhi ngayinye yezenhlalo.
Ukusebenzisana Kweqembu - Yabelana ngamanothi, landela izinto zesenzo, futhi ubone ukuthi ubani okhulumayo-ngesikhathi sangempela.
Ikhalenda Ehlanganyelwe - Abasebenzisi bangamukela, benqabe, noma banikeze impendulo kokuthunyelwe ngakunye. Wena namakhasimende akho ningahlola futhi konke okuqukethwe kwakho okuhleliwe, okushicilelwe, ukwamukela nokulahla.
Umugqa Wokushicilela Komphakathis - Dala izigaba zolayini ukuhlela okuthunyelwe kokuqukethwe okuhlobene nemikhankaso. Qiniseka ukuthi unokulinganisela okuhle kokuqukethwe isonto lonke, uma uthi shazi.
Ukuqapha Imidiya Yezenhlalo
Lalela ezingxoxweni zokuxhumana zenhlalo mayelana nomkhiqizo wakho, ukuncintisana nendawo yakho. Phendula ngokushesha ekuguqulweni okuphuthumayo.
Hlunga - Gxila kokubalulekile ngamapharamitha wokusesha we-YouTube ne-Twitter. Shayela phansi imininingwane ethile ngokusebenzisa ama-boolean opharetha ukuthola lokho okufunayo.
Hlela - Faka ilebula isu lakho lokuqukethwe ngokufaka ilebula ezintweni, njengokuthunyelwe okubalulekile, umsebenzi wokuncintisana, kanye nempendulo yamakhasimende ukuze kubuyiswe futhi kuphendulwe kalula.
Discover - Hlala phezu kwamakhasimende, ithemba, namathuba amasha webhizinisi - ngaphandle kwemingcele.
I-Social Media Metrics nokubika
Thola ukuthi yikuphi okuqukethwe okuphambili, kuphi, nini. Landelela izitayela nokusebenza kwethimba lakho bese uthole izincomo kuhlelo lwakho olulandelayo lokuqukethwe komphakathi ngedatha yokuziphatha komsebenzisi.
Focus - Thola ukufinyelela okungokwemvelo, ukufinyelela okukhokhelwayo, ukufinyelela okuphelele, ukuchofoza, kanye nenombolo yabasebenzisi ababandakanyekile kokuqukethwe kwakho.
Thola - Bona ukuthi bangaki abalandeli obatholayo noma obalahlekelayo, izikhathi lapho okuqukethwe kwakho kubukwa khona, kanye nokusebenzisana nokuqukethwe kwakho.
Linganisa - Bheka kalula izikhathi zokuphendula zawo wonke amalungu ethimba ukuqinisekisa ukuthi zonke izingxoxo zomkhiqizo ezingenayo ziphathwa ngokushesha. Izimpendulo zethrekhi namazwana abukeziwe, afihliwe, futhi asuswa.
Imibiko yamandla - Dala imibiko yangokwezifiso ngokuya ngamamethrikhi namabanga wamadethi owakhethayo, kumaphrofayli amaningi omphakathi. Ungaqhathanisa nezikhathi futhi usethe imibiko ehleliwe ezenzakalelayo nge-imeyili yakho.
Lolu hlobo lwedatha lwenza kube lula ukukhombisa umsebenzi owenziwe ngumuntu ophethe i-akhawunti ngayinye. Inhlanganisela enkulu yama-ejensi noma abaphathi bomphakathi abazimele.
Ipulatifomu Yezokuphathwa Kwemidiya Yezenhlangano
Thola ithuluzi lokulawula imidiya yomphakathi yonke-in-one-lentengo yamaqembu akhulayo.
Ukubika - Dala kalula futhi wabelane ngokubuka konke nokuntywila okujulile kokuqukethwe komphakathi kwamakhasimende akho, ukuzibandakanya, nokukhula. Thola amathani wezinketho zokwenza ngokwezifiso.
Ukuvunyelwa kokuqukethwe - Nikeza inqubo yokuvuma ehleleke ngendlela emangalisayo. Sebenzisa ikhalenda elilodwa kumaphrofayli omphakathi amaningi njengoba uhlelo lwakho lukuvumela. Njengoba ungeza amaklayenti, ungangeza amakhalenda.
Izindima - Ukuphatha, umhleli, umphathi, isivakashi — nika indima kumakhasimende nabasebenzi abasha. Indima ngayinye iyahluka ekufinyeleleni kwayo kokuthunyelwe, ukuphendula nokubika.
I-Social Media Management Mobile App
Kubalulekile ukuthi nginohlelo lokusebenza lweselula ukuphatha ama-akhawunti wami wezokuxhumana lapho usohambeni, futhi uhlelo lokusebenza lweselula lwe-Agorapulse yilokho engikudingayo! Ngingakwazi ukuphatha konke ukushicilela kwami ​​kalula futhi kalula kusuka ku-Inbox Yomphakathi yohlelo lokusebenza!
Ukudalula: Ngingumsebenzisi okhuthele kakhulu, umlandeli, futhi ngiyilungu le- I-Agorapulse! Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokubambisana kule ndatshana.
Tags: ipulatifomu yezokuxhumanaagorapulsei-bufferemeric ernoultFacebookimincintiswano ye-facebookizimbangi zekhasi le-facebookimincintiswano yesikhathi se-facebookinstagramLinkedIninqubo yokuvunywa kwezokuxhumanainqubo yokuqukethwe kwezokuxhumanaukuphathwa kwezokuxhumana nabantuukuphathwa kwezokuxhumana kwezenhlanganoezokuxhum emhlabeniukuqapha ezokuxhumukubika ezinkundleni zokuxhumanaizibalo zokuxhumana nabantuTwitter
Aug 6, 2015 ku-11: 33 AM
Ngizamile idemo futhi ngidumele kakhulu ngokulandelayo:
1. Ukungakwazi ukuhlela okuthunyelwe okwenzeka kabusha.
2. Alikho ikhono lokusindisa okuthunyelwe okusalungiswa
3.Donsa kokuthunyelwe kwangaphambilini bese usebenzisa futhi.
Ngabe ukhulumile nomuntu e-Agorapulse mayelana nokuthuthuka kwabo “kwethuluzi lokushicilela”? Ngizama ukuthola ukuthi sifuna ukubambelela noma cha. Ingabe ikhona ibalazwe lomgwaqo lezinto ongazibona kwenye indawo?
Aug 7, 2015 ku-10: 24 AM
Sawubona Jp. # 1 akufanele isetshenziswe ngoba kungaba ukwephula impahla yomphakathi. I-Twitter, i-Facebook ne-LinkedIn ayikuvumeli ukubuyekezwa kokuthunyelwe okuvela njalo. I- # 2 iyisici esithandekayo futhi sibonakala njengomqondo omuhle. # 3 futhi ingaba yinkinga nge- # 1. Ngizothumela engixhumana naye e-Agorapulse le ntambo ukuze ngiphawule ngayo.
Aug 7, 2015 ku-10: 44 AM
Sawubona Jp, impendulo enhle! Siyabonga ngokuthatha isikhathi sokuphendula uDoug 🙂
Empeleni i-Jp, uqinisile impela, kunezici ezithile ezibalulekile ezingekho kuthuluzi lethu lokushicilela. Izindaba ezimnandi ukuthi: sesiqale ukusebenzela kubo ezinyangeni ezi-2 ezedlule futhi bayeza, mhlawumbe ekuqaleni kukaSepthemba:
- Ulayini we-akhawunti ngayinye, lapho ungafaka khona umugqa okuqukethwe okufanayo kaningi (uma kuhlale kuluhlaza, kunjalo, uma kungenjalo, yini iphuzu 😉
- Ukubukwa kwekhalenda okusebenziseka kalula (abasebenzisi bethu bayawuthanda lowo mbono wokuqukethwe kwabo).
The, ngemuva kwesikhashana, sizofaka ukushicilelwa kwama-akhawunti amaningi (kushicilelwe kuwo wonke ama-akhawunti we-severakl ngasikhathi sinye). Ngemuva kwalokho, sizofaka i-LinkedIn, bese kuba yi-Instagram, mhlawumbe i-G + (ngisazibuza ngaleyo).
Ngakho-ke, kufanelekile ukulinda enye inyanga, ikakhulukazi njengoba sizobe sakha kabusha uhlelo lwethu lokusebenza lweselula phakathi naleso sikhathi (ukuzithoba esitolo sohlelo lokusebenza namuhla ngemuva konyaka wentuthuko 🙂